Kristy Zanak'ondrin'ny Paskano - Fiangonan'Andriamanitra Soisa
lahatsoratra > Day-by-Day > Kristy ny zanak'ondrintsika Paska
"Fa voavono ny Paska ho antsika, dia Kristy" (1. Kor. 5,7).
Tsy te handalo na hanadino ny zava-nitranga lehibe nitranga tany Ejipta isika, efa ho 4000 taona lasa izay, fony Andriamanitra nanafaka ny Israely tamin’ny fanandevozana. Loza folo ao 2. Nila nampihozongozona an’i Farao i Mosesy noho ny ditrany sy ny fiavonavonany ary ny fanoherana niavonavona tamin’Andriamanitra.
Ny Paska no areti-mandringana farany sy farany, nahatsiravina ka nahafaty ny lahimatoa rehetra, na olona na omby, rehefa nandalo ny Tompo. Nitsimbina ny Isiraelita nankatò Andriamanitra rehefa nodidiana hamono ny zanak’ondry tamin’ny andro faha-14 tamin’ny volana Abiba sy hanisy ra teo amin’ny tataom-baravarana sy ny tolam-baravarana. (Avereno azafady 2. Mosesy 12). Ao amin’ny andininy faha-11 dia antsoina hoe Paskan’ny Tompo izany.
Mety ho maro no nanadino ny Paska tao amin’ny Testamenta Taloha, fa Andriamanitra dia mampahatsiahy ny olony fa Jesosy, Paska ho antsika, dia voaomana ho Zanak’ondrin’Andriamanitra hanaisotra ny fahotan’izao tontolo izao. (Johanes 1,29). Maty teo amin’ny hazofijaliana izy rehefa noviraviraim-biby sy nampijalian’ny karavasy ny vatany, notsindromin’ny lefona ny lanivoany ary nandeha ny ra. Niaritra izany rehetra izany izy araka ny faminaniana.
Namela ohatra ho antsika izy. Tamin’ny Paska farany nataony, izay antsointsika ankehitriny hoe Fanasn’ny Tompo, dia nampianatra ny mpianany hifanasa tongotra izy ho ohatra amin’ny fanetren-tena. Ho fahatsiarovana ny fahafatesany, dia nomeny mofo sy divay kely izy ireo mba handraisana anjara ara-panoharana amin’ny fihinanana ny nofony sy ny fisotroana ny rany (1. Korintiana 11,23-26, Jaona 6,53-59 sy Jaona 13,14-17). Rehefa nandoko ny ran’ny Zanak’ondry teo amin’ny tataom-baravarana sy ny tolam-baravarana ny Isiraelita tany Egypta, dia fahitana mialoha ny ran’i Jesosy ao amin’ny Testamenta Vaovao izay nafafy teo am-baravaran’ny fontsika mba hanadiovana ny feon’ny fieritreretantsika sy hanadiovana ny fahotantsika rehetra. hodiovina ny ra (Hebreo 9,14 ary 1. Johannes 1,7). Fahafatesana no tambin’ny ota, fa ny fiainana mandrakizay kosa no fanomezana sarobidy avy amin’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika. Ao amin’ny fanasan’ny Tompo no ahatsiarovantsika ny fahafatesan’ny Mpamonjy antsika mba tsy hanadinoantsika ny fahafatesana mangirifiry sy mahamenatra teo amin’ny hazo fijaliana izay nitranga 2000 taona lasa izay noho ny fahotantsika.
Ny Zanaka malala, izay nirahin’Andriamanitra Ray ho Zanak’ondrin’Andriamanitra mba handoa ny vidim-panavotana ho antsika, dia iray amin’ireo fanomezana lehibe indrindra ho an’ny olombelona. Tsy mendrika izany fahasoavana izany isika, fa Andriamanitra no nifidy antsika tamin’ny fahasoavany mba hanome antsika ny fiainana mandrakizay amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany malala. Jesosy Kristy, Paskantsika, dia maty an-tsitrapo hamonjy antsika. Mamaky isika ao amin’ny Hebreo 12,1-2 “Koa isika koa, izay manana vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika, dia aoka hanaisotra izay rehetra mampahory antsika sy ny ota izay mampandefitra antsika mandrakariva, ary aoka isika hihazakazaka amin’ny ady izay mampahory antsika ka hiandrandra ny lanitra. Jesosy, ilay voalohany sy Mpanefa ny finoana, izay na dia ho nanana fifaliana aza, dia niaritra ny hazo fijaliana ka tsy niraharaha ny henatra, ary nipetraka teo ankavanan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra.